Izindlela ezi-5 Zokusabalalisa Izwi Ngembangela Okholelwa Kuyo Ngempela, Kusuka kuMeredith Blake, Social Media Genius eProSocial - Kuphefumulelwe
Ufundile Ubuhle Indaba ekhethekile, 'Imfihlo Umndeni Wami Igcinwe Iminyaka Eyikhulu', khona lapha ku-Inspired noma kumagazini wethu ka-Agasti 2012? I-quickie recap: Kumayelana nomndeni onabesifazane ababengabasebenzi bezocansi izizukulwane ezine, kuze kube yilapho owesifazane oyedwa ekugcineni ewuqedile umjikelezo. Yize ukushushumbiswa kwezocansi kubonakala sengathi kukude nasekhaya, inkinga yinto eyenzeka lapha e-U.S., Futhi isizathu esisodwa sokuthi inkinga ibe nokuqwashisa okunjalo kuvela emkhankasweni omkhulu oholwa nguMeredith Blake I-ProSocial .
Siphakamisa uBlake ngesimo esikhulu esithi Sifuna Umsebenzi Wakhe. Ummeli, umgqugquzeli, nosomabhizinisi kwezenhlalo, ngemuva kokusebenza ezingenzi nzuzo iminyaka eyi-10 bese egxumela eHollywood ukusiza ukuhlanganisa imboni yezokungcebeleka ukuthi ithathe izinyathelo ngemikhankaso, udale I-ProSocial eminyakeni emihlanu eyedlule ngesipiliyoni sakhe esivela kuyo yomibili imihlaba.
UBlake usiza amaklayenti ezingenzi nzuzo ukudala imikhankaso yezenhlalo enomthelela omkhulu ukudala okuzothutha abantu ngezinga elikhulu: lokho kusho ukubandakanyeka kwesikhathi esikhulu, imfundo enkulu, nokunyakaza okuzothinta ushintsho olubonakalayo. Futhi kuyasebenza.
ungaluqaqa kanjani uchungechunge lwegolide
Yize singeke sonke sihambise izintaba ngendlela uBlake enza ngayo - isipiliyoni seminyaka eyi-15 nombono we-guru emhlabeni kuzosiza - sinezizathu esifuna ukuzilwela, nezindlela esingakwenza ngazo. Futhi uBlake unezeluleko angabelana ngazo ngokuthi ungakwenza kanjani, ngakho-ke ngamcela ukuthi ahlukane nathi! Isisetshenziswa sakhe esikhulu kunazo zonke 'n' esibi kakhulu?
1. Imithombo yezokuxhumana!
Kepha linda - kunokuningi ku-tweeting, Facebooking, pinning, kanye ne-reblooging ukuze ukwazi ukuqashelwa, ikakhulukazi lapho uzama ukufaka ukusekelwa kwendaba eshintsha umhlaba. UBlake uthi ufuna ukwakha okungaphezu 'kokuqwashisa,' okuvele kungenise umsindo wakho kumxube - ufuna ukuqiniseka ukuthi uthola kwesokudla izwi ukuphuma.
'Amandla ezinkundla zokuxhumana abaluleke impela,' kusho uBlake. 'Kuyinto ebucayi ekwenzeni ushintsho, kepha akwanele ngokwakho. Kumele futhi sithole isakhiwo sangempela samabhuloho omhlaba ukuze sizitholele ushintsho. '
lapho ungabhobozwa khona indlebe
Nazi ezine Okuningi izinyathelo zokwakha lawo mabhuloho, nokukhipha igama ngesizathu okholelwa kuso ngempela:
2. Bona ukuthi iziphi izinsiza esezivele zikhona ezisekela imbangela ofuna ukuyilwela. Bona ukuthi yini eqondaniswe nomsebenzi wakho. Ukuqonda ukuthi bangobani kakade labo ababambe iqhaza. ' UBlake uphakamisa ukuthola ukuthi ngubani 'ophume emseleni osevele' enza izandla zakhe zingcolile futhi zenze ukuxhumana kusebenze kubo.
3. Bheka ngale kwenkinga yakho. Yiziphi ezinye izingqinamba ezingabonakali kahle? Yini ezogqugquzela abantu abasha ukuthi babambe iqhaza? UBlake wenza isibonelo somkhankaso wokulwa nokushushumbiswa kwezocansi abesebenza kuwo owaphenduka inhlangano emangalisayo yokufunda izinsizakalo. Ungasabalalisa umyalezo wakho ngokuthola ezinye izindlela zokuletha abantu enkingeni yakho.
4.Imantra yakho entsha: * Iminyakazo kwesinye isikhathi iqalwa ngeyodwa kepha iqhutshelwa phambili ngabaningi. * UBlake uthi zibuze: 'Siqala kanjani ukukala?' Impendulo: Ukuxhumana. Qala ukuxhuma ezingeni lasendaweni bese wakhe ukusuka lapho - ungaqoqa abantu abayi-15 ezingeni lomphakathi ukuze wenze umthelela.
izipho kulabo abanakho konke
__5. Yiba nolwazi ngale nkinga .__ Ngaphezu kwakho konke, uBlake uthi awukwazi ukwenza umehluko uma ungazazi izinto zakho ngokuphelele. 'Qonda ukuthi ukhuluma ngani futhi uthole amaqiniso' - lokho kusho ukuthi zombili ngokwamanani futhi Funda kuphela.
KULUNGILE, KULUNGILE, ngifuna ukwenza umehluko, kepha angikwazi ukuba wushintsho lwesikhathi esigcwele , usho. Ngiyakuzwa, kanjalo noMeredith Blake! 'Uma ungenaso isikhathi, kulapho imithombo yezokuxhumana inamandla amakhulu,' usho kanje. Futhi khuluma ngothando lwakho! Ungakhohlwa ukubaluleka kwezixhumanisi zangempela zomhlaba. Iba nezingxoxo zekhofi, emsebenzini, esikoleni - lungisa udaba lwakho lube yilokho okwaziyo. '
Ngabe ukhuthazwe ngumsebenzi kaMeredith Blake noProSocial? Yisiphi isizathu ongasibamba ngaso?
P.S. Ngabe wazi noma ngubani oneminyaka engama-25 noma ngaphansi enza noma yini enhle? Mqoke ukuba abe ngowesifazane Wonyaka manje!
imikhonto ka-britney manje nangesikhathi
ubuso obumbumbulu ngaphambi nangemva
iyiphi igebe leminyaka likhulu kakhulu
zezinwele zangaphambili eziboshwe zezinwele ezimnyama